အေဂျင်စီများကသူတို့ကော်ဖီစားပွဲပေါ်တွင်ဤစာအုပ်လိုအပ်သည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2009 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2009 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်သူဌေးဆီသို့သွားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်သည်ကားကားဂိုဒေါင်ရောင်းဝယ်ရေးကြော်ငြာများကိုမြှင့်တင်ရန်မယုံနိုင်စရာအတွေးဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏နေအိမ်ကိုရှာဖွေပြီးကားဂိုဒေါင်သို့တစ်ရက်သွားရန်စီစဉ်ထားသည့်အွန်လိုင်း application တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကြော်ငြာရှင်များသည်နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ကော်ဖီအတွက်ကူပွန် (သို့) နှစ်ခုထည့်နိုင်သည်
ကြံစည်ထားသောလမ်းကြောင်းသည်ကားဂိုဒေါင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းကိုအချိန်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမောင်းနှင်ရန်နှင့်ကားမောင်းရန်အချိန်နည်းသွားစေသည်။ သူတို့ကသော့ချက်စာလုံး၊ အကွာအဝေး၊ အချိန်စသည်ဖြင့်စီစစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်သည်ကောင်းသည်ဟုထင်ပြီးကျွန်ုပ်သွားခဲ့သည် (ထိုအချိန်က ၁၀ ဒေါ်လာအောက်) ။
ဒါဟာခဲ့ သေဆုံးအတွေးအခေါ် ဒါကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုပတ်ပြီးလှုပ်နေတာ ၅ နှစ် ၆ နှစ်လုံးလုံးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ၎င်းကိုတည်ဆောက်သည့်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် (အခြားလက်တွေ့ကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာနှင့်) ထူးခြားသောအရာတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်ကို သိ၍ မျက်ရည်ကျပါမည်။ ဒီနေ့တော့စာအုပ်အသစ်တစ်ခုမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကြောင့်ဒီနေ့ငါသက်သာရာရူ့ကိုသက်တောင့်သက်သာခံစားလိုက်ရသည်။
ငါ (နှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည် hardcover စာအုပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် အကျဉ်းဖော်ပြချက်) mail ကိုအတွက်ယနေ့ကအမှန်တကယ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါပဲ။ စာအုပ်၏ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်ဝြေခင်း၏အရည်အသွေးနှင့်စာအုပ်အတွင်းရှိအတွေးအခေါ်များမှလှပသောအနုပညာသည်ကျွန်ုပ်၏ကော်ဖီစားပွဲပေါ်တွင်တင်မည့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီတိုင်းတွင်မိတ္တူတစ်ခုစီရှိသင့်သည်။
တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် သတ်ဖြတ်အတွေးအခေါ်များ ယခုအပတ်ထွက်နှင့်မဲပေးအပေါ်! ငါမင်းရဲ့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုပဲ Garage Sale Mapper အတွက်မဲပေးပါ! စာအုပ်၏နောက်ဆုံးအတွေးအခေါ် ၅၀ ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတီထွင်မှုစွမ်းရည်အချို့နှင့်ပေါင်းစပ်နေသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
SEM ၏လျှို့ဝှက်ချက် - ဂူဂဲလ်၏ရလဒ်များသည်အမြစ်စွဲနေသည်
ဇွန် 18, 2009 မှာ 11: 54 pm တွင်
မင်းရဲ့ Garage Sale Mapper အတွက်ငါမဲပေးရမယ်။ အရမ်းရယ်ရတယ်!
ဇွန် 20, 2009 မှာ 3: 04 pm တွင်